I-china MWA Planetary Reducer HA-090 mveliso kunye nabenzi | IHarmonic
1. Ha uthotho lwezixhobo zokunciphisa iiplanethi zamkela ukuthwala umnqamlezo, oneempawu zokuchaneka okuphezulu, ukuqina okuphezulu kunye nomthamo omkhulu wokuthwala; umzuzu wokuthwala amaxesha aliqela wokuthwala ibhola ebanzi; kwangaxeshanye, le nto isetyenziswayo isetyenziselwa ukuqonda imveliso yazo zombini kunye nediski yesixhobo sokunciphisa, isenza kube lula ngakumbi ukuba abasebenzisi basebenzise kwaye babuyisele enye.
2. Ha uthotho lwezixhobo zokunciphisa iiplanethi zamkela isetyhula yezixhobo zetyhula kwaye ngobume bezixhobo zamkela izixhobo zaseJamani zeVera izixhobo zokwakha itekhnoloji yokwenza izixhobo zangaphakathi. Ukuchaneka kwezixhobo zayo kuphezulu kwitekhnoloji yokwakha yesiko, kwaye ukungqinelana kwemveliso kulunge kakhulu.
3. Izixhobo zeeplanethi ezisetyenziswe kuthotho lwezixhobo zokunciphisa iiplanethi zenziwa ngokufaka kunye nokuqengqeleka kwenkqubo yezixhobo zeVera ezingeniswe eJamani, ngokuchaneka okuphezulu; Ubunzima bomphezulu begiya bonyuswe ukuya kwi-900HV ngokusebenzisa itekhnoloji ye-ion nitriding eqhubela phambili, eyenza iimveliso zibe nobomi benkonzo ephezulu kakhulu.
4. Ha series yokunciphisa yenzelwe nezixhobo ezijikelezayo. Izixhobo zihamba ngokugudileyo emva kokubala iiprofayili ngesoftware yaseJapan, kwaye ineempawu zengxolo ephantsi, imveliso ephezulu kunye nokubuyela umva okuphantsi.
5. Isiphelo segalelo kunye nokubotshwa kwesixhobo se-HA sokunciphisa iiplanethi sisebenzisa isakhiwo esidibeneyo sokuqinisekisa ukuba amandla amakhulu okubamba enza kwi-shaft yemoto kunye nokuchaneka kokuhambisa kwesinciphisi yimpazamo zero kwisantya esiphezulu sokufaka.
Previous: Ukunciphisa iiplanethi zeMWA HA-060
Next: Ukunciphisa i-MWA yeplanethi HA-115